Mbido > Palmitoylethanolamide (agwa)
Ọ bụrụ na ị na-achọ a elu-edu Palmitoylethanolamide (agwa) ntụ ntụ maka ọrịre, mgbe ahụ ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. Anyị bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu, ndị nwere ihe ọmụma, na ahụmịhe Palmitoylethanolamide (PEA) na-emepụta na China. Anyị na-enye ngwaahịa dị ọcha ma dị mma nke a na-anwale mgbe niile site na ụlọ nyocha nke atọ nke ụwa iji hụ ịdị ọcha na nchekwa. Anyị na-anapụta iwu n'ofe US, Europe, Asia, na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ nke kachasị mma kachasị mma, kpọtụrụ anyị na cofttek.com.
Kedu ihe eji eme Palmitoylethanolamide?
Palmitoylethanolamide (PEA) sitere na ezinụlọ endocannabinoid, otu ìgwè nke amy acid amides. E gosipụtara PEA nwere ọrụ nyocha na mgbochi mkparị ma jiri ya n'ọtụtụ ọmụmụ a na-achịkwa lekwasịrị anya na njikwa ihe mgbu na-adịghị ala ala n'etiti ndị ọrịa toro eto nwere ọnọdụ ọgwụgwọ dị iche iche.
PEA ọ na-ebuli gị elu?
Were na doses nke 500mg-1.5g kwa usoro onunu ogwu, n'ime awa ole na ole ọ bụla, PEA na-enye onye ọrụ ahụ mmetụta nke euphoria, ume, mkpali, na ọdịmma zuru oke. Esp mgbe ejikọtara ya na mao-b inhibitor, hordenine, PEA na-ewere ọkwa ọhụrụ nke euphoria na obi ụtọ zuru oke.
Kedu nsogbu ndị ọzọ agwa
Enweghi nsogbu nsogbu mara. Enwere ike iwere PEA na ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na - eme ka ihe mgbu na - akpata ihe mgbu na - egbu egbu. Enwere ike iji Palmitoylethanolamide yana ihe ndị ọzọ na-enweghị mmetụta ọ bụla.
Iwu phenethylamine ọ bụ iwu?
Phenethylamine (PEA) bụ ihe ndị sitere n'okike, monoamine alkaloid, na ịchọta amine, nke na-arụ ọrụ dị ka usoro nhụjuanya nke etiti na-akpali ụmụ mmadụ.
Ogologo oge ole ka PEA na-adịru?
Mgbe ị na-eji ọnụ: palm Tụ Palmitoylethanolamide bụ POSSIBLY SAFE maka ọtụtụ ndị okenye mgbe ejiri ya mee ihe ruo ọnwa 3. Mmetụta ndị nwere ike ibute, dịka afọ iwe, dị obere. Enweghi ozi zuru oke zuru oke ịmara ma ọ bụrụ na Palmitoylethanolamide dị mma iji rụọ ọrụ karịa ọnwa 3.
Phenylethylamine ọ ga-ada ule ọgwụ?
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) anaghị achịkwa melatonin. Nke ahụ bụ n'ihi na anaghị ele ọgwụ melatonin anya dị ka ọgwụ. Ya mere, enwere ike ree ya dị ka mgbakwunye nri dị ka vitamin na mineral, nke FDA anaghị enyocha anya.
Ihe mgbakwunye pea bụ nchekwa?
PEA bụ ihe okike sitere n’anụ ahụ; ọ dị oke irè ma dịkwa mma iji dị ka mgbakwunye maka mgbu na mbufụt.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ka Peas banye?
Peas were ụbọchị asaa ruo iri atọ ka ọ daa. Peas ga-agba ọsọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na okpomọkụ ala dị 7 ruo 30 Celsius Fahrenheit. Can nwere ike ime ka usoro germination dị ngwa site na ị banye peas ruo awa 65 ruo 70 tupu ị kụọ. N'ezie, enwere ihe ndị ọzọ na-emetụta ngwa ngwa peas ga-eto ma too.
Nwere ike ịzụta phenylethylamine na ụlọ ahịa?
Ihe mgbakwunye ndị a mgbe enyere ya aka na-abawanye ogo ụbụrụ yana belata nrụgide. Ọ dị n'elu tebụl, na otu onye anaghị achọ ọgwụ ịzụta ya. A na-ejikwa Phenylethylamine mee ka mgbatị na itinye uche.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ka pea rụọ ọrụ?
Anyị mepụtara usoro ọgwụgwọ a mgbe anyị gwọchara ọtụtụ narị ndị ọrịa na-arịa ọrịa neuropathic. Dabere na ahụmịhe ahụike anyị, anyị na-eche na ịmalite site n'ụdị asụsụ PEA maka opekata mpe ụbọchị 10 nwere ike inyere aka iru ngwa ngwa ọgwụgwọ PEA zuru oke.
Azụ ọ na-enyere ụra?
Typedị abụba a hụrụ n'ụzọ anụ ahụ pụrụ ịbụ isi ihe na-akpata ụra abalị. Ndị ọrụ nyocha nwere olile anya nke akpọrọ PEA - ma ọ bụ palmitoylethanolamide - nwere ike ọ bụghị naanị inye aka na ụra kama ọ na-alụ ọgụ mgbu ma belata mbufụt.
Agwa ọ bụ ihe na - akpali akpali?
Ogologo oge ole ka phenylethylamine ga-anọ na sistemụ gị?
Enwere ike iwere ya na ọgwụ mgbu ndị ọzọ ma ọ bụ naanị ya, dịka onye ọrụ ahụike gị gwara gị, iji kwado enyemaka mgbu. PEA nwekwara ike inye aka belata ịdabere na ọgwụ mgbu siri ike nke na-akpata nsonaazụ achọghị. Uru kachasị nwere ike iburu ọnwa 3 mana a na-ahụkarị nsonaazụ na izu 4-6.
Chocolate nwere phenylethylamine?
Chocolate nwere ntinye kachasị na nri ọ bụla nke phenylethylamine, nke bụ kemịkal na-emepụta n'ụbụrụ mgbe mmadụ nwere ịhụnanya. Ma arụmụka nke "amphetamine chocolate" bụ ihe arụ ụka. Imirikiti ma ọ bụrụ na ọ bụghị phenylethylamine niile sitere na chocolate ka metabolized tupu ya erute CNS.
Ebee ka achọtara phenylethylamine?
Na mammals, a na-emepụta phenethylamine site na amino acid L-phenylalanine site na enzyme aromatic L-amino acid decarboxylase site na enzymatic decarboxylation. Na mgbakwunye na ọnụnọ ya na mammals, a na-ahụ phenethylamine n'ọtụtụ nje na nri ndị ọzọ, dị ka chocolate, ọkachasị mgbe gbaa ụka.
Kedu ka PEA si arụ ọrụ maka mgbu?
Nnyocha egosila na PEA nwere ihe mgbochi mkpali na mgbochi na-ewere ya mgbe niile nwere ike ime ka ahụ gị nweghachi ihe mgbu site na ịzaghachi nzaghachi nke sel sistemụ ụjọ nke na-akpata mgbu.
Phenylethylamine ọ na-ebuli gị elu?
N'iji 500mg-1.5g kwa onunu ogwu, kwa awa ole na ole, PEA na-enye onye ọrụ ahụ mmetụta nke euphoria, ume, mkpali, yana ọdịmma mmadụ niile. Esp mgbe ejikọtara ya na mao-b inhibitor, hordenine, PEA na-ewere ọkwa ọhụrụ nke euphoria na obi ụtọ zuru oke.
Ogologo oge ole ka Hordenine na-anọ na sistemụ gị?
Na ọka bali, ọkwa hordenine na-eru karịa n'ime ụbọchị 5-11 nke germination, wee jiri nwayọọ nwayọọ belata ruo mgbe naanị akara metụtara mgbe otu ọnwa gachara. Ọzọkwa, hordenine na-metụtara nanị akụkụ ụfọdụ na mgbọrọgwụ.
Palmitoylethanolamide (PEA) ọ dị mma?
Agbanyeghị na Palmitoylethanolamide na-anabata ahụ ahụ nke ọma, ọ bụrụ na ndị mmadụ achọpụta mmetụta ọ bụla ọ na-akpata, a na-adụ ha ọdụ ka ha belata ncha ọnụọgụ ha gaa na 400 mg n'ụbọchị.
Nke ka nkpa, ekwesighi iwe ihe omumu ihe kariri onwa ato. Iji PEA akwadoro nwere ike ibute nsogbu nke afọ. Agbanyeghị, ọ bụ nsonaazụ ọ na-anaghị ahụkarị. Nke kachasị mkpa, ekwesighi iji PEA na anụ ahụ na ndị dị ime na ndị na-enye nwa ara ga-ezere iji ya ebe ọ bụ na enweghị nnyocha ma ọ bụ ihe akaebe zuru ezu iji kwuo na ọgwụ adịghị mma maka ìgwè ndị a. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ọ bụla, ọ kacha mma ka gị na dọkịta hụ tupu iwee mmeju dika Palmitoylethanolamide.
Ebee ka m nwere ike nweta Palmitoylethanolamide?
Azịza ya bụ Cofttek. Cofttek bụ onye na-emepụta ngwa ọrụ agbakwunye nke malitere na 2008. companylọ ọrụ ahụ na-ebuli onwe ya elu na ndị ọrụ R&D nwere nka nke na-arụ ọrụ n'ehihie iji hụ na akụrụngwa a na-enye ndị ahịa dị oke mma. Karịsịa, ụlọ ọrụ ahụ na-etinye ego dị ukwuu na biotechnology na nyocha nyocha. A na-emepụta ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ na nnukwu ụlọ ọrụ biochemical dị elu nke na-etu ọnụ maka usoro ndị na-eweta ngwaahịa tozuru oke na ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ọ bụ nkwa a nke ụlọ ọrụ ahụ mere iji mepụta akụrụngwa dị elu nke mere Cofttek aha a maara nke ọma na ahịa ngwaahịa. Taa, o nwere ndị ahịa n'ofe ụwa.
Gịnị bụ agwa ude?
PEA ude bụ ude nwere ezigbo ịta nke eke na ihe nchebe Palmitoylethanolamide (PEA). Ya mere enwere ike iji ude PEA dị ka ezigbo mgbakwunye maka mmetụta nke capsules na ahụ.
Gini bu Palmitoylethanolamide (PEA)?
Palmitoylethanolamide (PEA) bụ abụba abụba nke na-emepụta obere obere ahụ, nke ka ukwuu n'ime nzaghachi nke mmebi anụ ahụ ma ọ bụ anụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ. A na-emepụta PEA n'ụzọ nkịtị site na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-azaghachi mgbu ma ọ bụ mbufụt. Palmitoylethanolamide, nke a makwaara dị ka PEA bụ mmiri ara ehi na-emekarị nke na-adaba n'okpuru otu fatty acid amides group. Ọ bụ ezie na usoro a na-emepụta site na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ọ dịkwa na anụmanụ na osisi ya mere, enwere ike inweta site na mpụga, dịka akwa nkochi, soy lecithin, alfalfa, mmiri ara ehi, obereekere na soybean. PEA nwere njirimara gbasara ike ya, ya mere, nwere ike imetụta ọtụtụ isi ọrụ nchịkwa n'ime ahụ.
A na-ewerekarị PEA maka ebumnuche mgbochi mkpali na ibelata ihe mgbu. Yabụ, kedu ka PEA si arụ ọrụ otu mgbe n'ime ahụ? Ozugbo n'ime ahụ, PEA na-ejide onwe ya na saịtị a na-atụ anya nke na-agbanyụ ọrụ mkpali nke cell mgbe usoro njikọ ahụ gasịrị. Nke ka mkpa bụ na ụfọdụ nyocha na-egosi na enwere ike ịmetụta mmetụta gbasara ọrịa PEA na ikike nke ogige ahụ igbochi ọrụ nke sel ndị nwere ike ịmịnye ọrịa maka ibunye akara mgbu. N'agbanyeghị ihe usoro ahụ bụ, otu ihe doro anya na PEA na-enye enyemaka site na mgbu neuropathic yana mbufụt.
Gịnị kpatara anyị ji chọọ Palmitoylethanolamide (PEA)?
N’ime afọ ole na ole gara aga, Palmitoylethanolamide (agwa) ahụla ihe mberede na-ewu ewu na ewu ewu ya. Agbanyeghị na achọpụtara ọgwụgwọ nke PEA laa azụ na 1950s wee rue mgbe ahụ, ndị sayensị na ndị ọrụ nyochaala ọmụmụ a nke ọma, n'ime afọ ole na ole gara aga, enwere mmasị na PEA amụbawo. Ihe kpatara nke a bụ maka nchekwa na ọrụ ọgwụgwọ nke ogige ahụ nwere ike rụọ n'ime ahụ yana ikike ijikwa oke ọnya isi na nsogbu metụtara akwara ozi.
Agbanyeghị, ahụ mmadụ na-emepụta pea na obere pere mpe ma karịa karịa, ọnụọgụ a ezughi iji gbochie mbufụt na mgbu ma yabụ, a na-adụkarị ndị mmadụ ọdụ ka ha were ihe mgbakwunye PEA. Ibelata ihe mgbu na mbufụt bụ naanị otu n'ime ọtụtụ uru nke PEA.
Kedu ihe bụ PEA maka fibromyalgia?
Dika ihe ndi ozo nke puru iche nke PeA na Australia, na otutu mba ndi ozo, dika nri nri, obughi ogwu. E gosipụtara PEA na ọ nwere antiinflammatory, antinociceptive, anticonvulsant na neuroprotective Njirimara ma na-ejiwanye na-agwọ ọrịa na-adịghị ala ala.
Gịnị bụ ọrịa mgbu neuropathic?
Neuropathic Pain Treatment Anticonvulsant na ọgwụ antidepressant na-abụkarị usoro mbụ nke ọgwụgwọ. Studiesfọdụ ọmụmụ ihe mgbu neuropathic na-atụ aro iji ọgwụ ndị na-abụghị steroidal anti-inflammatory (NSAIDs), dị ka Aleve ma ọ bụ Motrin, nwere ike belata ihe mgbu. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịchọ onye na-egbu mgbu dị ike karị.
Kedu ka m ga-esi jiri ụra neuropathic rahụ ụra?
Ihi ụra na ikpere gị dị elu nwere ike belata mgbaàmà gị na-egbu mgbu site na mbenata nrụgide lumbar gị na-etinye na mgbọrọgwụ akwara gị. Dina n’elu azụ — debe ikiri ụkwụ gị na ikwo ụkwụ gị n’ebe i dina na bed wee gbue ikpere gị ntakịrị n’elu ụlọ.
Kedụ ka m ga-esi agwọ ọrịa akwara n'ụlọ?
Atụmatụ maka nhụjuanya akwara. Nọgide na-arịa ọrịa shuga. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, dowe shuga dị n’ọbara. Gapụ ya. Mgbatị ahụ na-ewepụta ọgwụ mgbu nke a na-akpọ endorphins. Kpoo ụkwụ gị. Ọ bụrụ na ụkwụ na-emetụta ụfụ akwara, ọ bụ oge iji lekwasị anya na nlekọta ụkwụ dị mma.
Mmiri mmiri ọ na-enyere neuropathy aka?
Ọ bụghị naanị na mmiri ọkụ na-atụrụ ndụ, mana ọ nwekwara ike ịkwalite mgbasa na ahụ gị niile. Vinik na-ekwu, sị: “Ọ nwere ike inye enyemaka ozugbo. Mana n'ihi na ọrịa neuropathy na-arịa ọrịa shuga nwere ike ibute ụfụ, gbaa mbọ hụ na mmiri anaghị ekpo oke ọkụ tupu ị banye.
Palmitoylethanolamide ọ dị mma n'afọ ime?
Ndi umu nwanyi di ime ghara iji ya. Palmitoylethanolamide nwere ike inye aka na-edozi ahụ ọkụ na mgbu na-adịghị ala ala. Ekwesịrị iwere ya naanị n'okpuru nlekọta ahụike.
Kedu ihe eji mmiri mmiri agwa?
PEA egosiputa irè maka nhụjuanya na-adịghị ala ala nke ọtụtụ ụdị metụtara ọtụtụ ọnọdụ na-egbu mgbu, ọkachasị na mgbu neuropathic (akwara), mgbu na-egbu mgbu na mgbu visceral dị ka endometriosis na interstitial cystitis.
Ebee ka agwa si bia?
Palmitoylethanolamide bụ kemịkal sitere na abụba. A na – ahụ ya na nri dịka nkochi ime akwa na ahụekere, na ahụ mmadụ. A na-ejikwa ya dịka ọgwụ.
Gịnị bụ ọgwụgwọ maka agwa?
Ekwesịrị iji Epinephrine tinye ya na 1-mg doses intravenously / intraosseously (IV / IO) kwa nkeji 3-5 ọ bụla mgbe ejidere ọrụ eletriki na-enweghị atụ (PEA). Achọpụtala ọgwụ epinephrine dị elu karị ma gosipụta enweghị mmụba na nlanarị ma ọ bụ nsonaazụ neurologic na ọtụtụ ndị ọrịa.
A na-ahụkarị agwa na ndị ọrịa nwere hypovolemia?
N'ihe dị iche iche nke PEA etiologies, ụgha-PEA na-akpatakarị hypovolemia, tachydysrhythmias, mgbatị nke obi, ma ọ bụ ihe mgbochi igbochi ịgbasa, dịka embolism akpa ume, tamponade, na pneumothorax.
Kedu nke bụ ihe nwere ike ịgbanwe ihe na - akpata ụda agwa?
Hypovolemia na hypoxia bụ ihe abụọ kachasị akpata PEA. Ha bụkwa ihe na-agbanwe agbanwe nke kachasị mfe ma kwesịrị ịdị na elu nke nchọpụta ọ bụla dị iche iche. Ọ bụrụ na onye ahụ nwere nlọghachi nke mgbasa ozi na-enweghị atụ (ROSC), gaa n'ihu na-ejide post-cardiac njide.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ihe ewu ewu na Palmitoylethanolamide agbaala nnukwu mgbapụta, ọ bụ n'ihi na ndị mmadụ amatala banyere ọtụtụ ojiji ya. Thesebọchị ndị a, ndị mmadụ na-eji Palmitoylethanolamide bụ isi maka nsonaazụ ya, mana a na-enyekarị ya iwu maka ọrịa ndị siri ike, dịka ọrịa Lou Gehrig, ọrịa shuga na-arịa ọrịa shuga, ọtụtụ sclerosis, fibromyalgia, ọrịa carpal tunnel, glaucoma, autism, eczema, endometriosis as well as ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Peoplebọchị ndị a, ndị mmadụ na-ejikọkwa mgbakwunye Palmitoylethanolamide (PEA) iji kwalite ọnwụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịmekwu nnyocha na mpaghara a.
① Nnyocha mbụ emere na-egosi Nsonaazụ Na-ekwe nkwa na Ọgwụgwọ Ọrịa Lou Gehrig
Ọrịa Lou Gehrig ma ọ bụ Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) bụ ọrịa na-eyi ndụ egwu nke na-eduga n'ọrịa moto-neuron na n'ikpeazụ nkwarụ na-aga n'ihu. Nnyocha emere na mbụ gosiri na palmitoylethanolamide mgbe ewere ya na riluzole, nwere ike inye aka mee ka ọnọdụ a ka mma. PEA bụ endocannabinoid nke na-eme ka akpa ume na-arụ ọrụ na ndị ọrịa ALS.
② Ọ na - enyere aka na ọrịa Carpal Tunnel Syndrome
Carpal Tunnel Syndrome bụ ọnọdụ na-emetụta aka. Ndị mmadụ na-arịa ọrịa a na-enweta ịta ahụhụ na ọnụnọ n'aka. Ọnọdụ ahụ metụtara aka niile, gụnyere mkpịsị aka niile ma e wezụga obere mkpịsị aka. Ọmụmụ ihe ọmụmụ 2017 kpughere na enwere ike iji PEA rụọ ọrụ nke ọma iji gwọ ọrịa syndromes, gụnyere Carpal Tunnel Syndrome. Yabụ, enwere ike ịme ihe mgbakwunye PEA iji chịkwaa ihe mgbu na ahụ erughị ala nke Carpal Tunnel Syndrome kpatara.
③ Ọ Nwee Ọkwa n’ọrụ megide Ọrịa Neuropathy na-arịa ọrịa kansa na Fibromyalgia
Ọrịa neuropathy nke ọrịa shuga bụ mmebi akwara na-akpata ọrịa shuga. Otu n'ime ihe mgbaàmà kachasị nke ọrịa shuga na-arịa ọrịa shuga bụ mgbu na ụkwụ na ụkwụ. Fibromyalgia, n'aka nke ọzọ, bụ ọnọdụ na-emetụta usoro musculoskeletal. N'akụkụ ike ọgwụgwụ na ncheta okwu, mgbaàmà kachasị nke fibromyalgia bụ ihe mgbu na usoro musculoskeletal dum.
Ma neuropathy na-arịa ọrịa mamịrị na fibromyalgia bụ ọnọdụ na-egbu mgbu nke na-abụghị ihe a na-ahụkarị. Ọ dabara nke ọma, enwere ike ijikwa mgbu jikọtara ya na ọnọdụ abụọ a site na iji palmitoylethanolamide.
④ Enwere ike iji ya gwọọ ọrịa nke ọtụtụ ọrịa Sclerosis
Otutu Sclerosis bu onodu nke ihe eji alụso ọrịa ọgụ na-amalite ịwakpo myelin nke na-ekpuchi akwara, nke na-eduga na ibelata ma ọ bụ enweghị nkwukọrịta n'etiti ụbụrụ na ahụ ndị ọzọ. Oria nwere ike imebi kpamkpam. Agbanyeghị, nyocha nke mbụ gosiri na PEA, mgbe enyere ya na interferon-beta1a, nwere ike inye aka belata ọrịa ndị metụtara ọtụtụ Multi Sclerosis.
⑤ Ọ na-adị irè megide Glaucoma na Ọrịa Temporomandibular
Glaucoma bụ ọnọdụ na - emetụta akwara optic ma bụrụ ihe na - ebute nsogbu nke ikpu ìsì n'etiti ndị gbara afọ 60 na karịa. Ọrịa TMJ, n’aka nke ọzọ, na-ebute mgbu azụ. Nchọpụta gosiri na enwere ike iji palmitoylethanolamide ma ọ bụ PEA gwọọ ụfụ nke ọnọdụ abụọ a kpatara.
⑥ Uru ndị ọzọ
Ndị ọzọ karịa ojiji ndị a kpọtụrụ aha n'elu, a na-atụ aro PEA maka mgbu akwara yana nyocha nke ịwa ahụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ejirila ya mee ihe iji mesoo ọnọdụ ndị ọzọ, dịka isi ọwụwa, ịda mbà n'obi, eczema, endometriosis, autism, ọrịa akụrụ na mgbu vulvar. PEA egosipụtakwala ịdị mma nke ịba ụba. Agbanyeghị, achọrọ nyocha ọzọ na akụkụ ndị a.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọmụmụ ihe dị iche iche ejirila usoro ọgwụgwọ dị iche iche ma ya mere, ọ nweghị usoro ọgwụgwọ a ga-ewere dị ka nke zuru oke. Otú ọ dị, a gwara ndị mmadụ ka ha debe ihe oriri ha nke Palmitoylethanolamide (PEA) n'okpuru 300-1,200 mg kwa ụbọchị. A na-adụ ndị na-ewere ihe mgbakwunye Palmitoylethanolamide ka ha were 350-400 mg ugboro atọ n'ụbọchị ma usoro onunu ogwu ekwesịghị ịgafe ọnwa 2 na mkpokọta.
(1) Gabriella Contarini, Davide Franceschini, Laura Facci, Massimo Barbierato, Pietro Giusti & Morena Zusso (2019) 'A na-ejikọ ọnụ ọnụ microitozed palmitoylethanolamide / luteolin mejupụtara akara nrịanrịa na akara nrịba ama dị mkpa na ụdị oke nke nnwale autoimmune encephalomyelitis' Journal nke Neuroinflammation,
(2) Maria Beatrice Passavanti, Aniello Alfieri, Maria Caterina Pace, Vincenzo Pota, Pasquale Sansone, Giacomo Piccinno, Manlio Barbarisi, Caterina Aurilio & Marco Fiore (2019) 'Usoro ọgwụgwọ nke palmitoylethanolamide na njikwa ihe mgbu: usoro iwu maka nyocha nyocha', Sistem Nyocha olu,
(3) Eleonora Palma, Jorge Mauricio Reyes-Ruiz, Diego Lopergolo, Cristina Roseti, Cristina Bertollini, Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, Emanuela Onesti, Cristina Limatola, Ricardo Miledi, Maurizio Inghillerid (2016) 'Acetylcholine ndị natara site na akwara mmadụ dị ka ọgwụ maka ọgwụ ALS', Proc Natl Acad Sci US A.,.
(4) Di Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'Palmitoylethanolamide Bụ Onye Na-agbanwe Mgbanwe Ọrịa na Neuropathy Peripheral: Mgbu Mgbu na Neuroprotection Keekọrịta PPAR-Al-Mediated Mechanism', Mediators Inflamm.
(5) PALMITOYLETHANOLAMIDE (EBE) (544-31-0)
(6) Njem iji chọpụta Egg
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –TLAGHAG Anwansi nke Ndụ Gị
(8) Anandamide VS CBD: Kedu nke dị mma maka ahụike gị? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Ha!
(9) Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Nicotinamide Riboside Chloride
(10) Magnesium L-Threonate Supplementate: Uru, usoro ọgwụgwọ, yana mmetụta dị n'akụkụ ya
(11) Uru 6 maka uru Ahụike nke Resveratrol Supplementments
(12) Isi uru ise nke iwere Phosphatidylserine (PS)
(13) Isi uru ise nke iwere Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
(14) Ihe mgbakwunye Nootropic kachasị mma nke Alpha GPC
(15) Ihe mgbakwunye kachasị mma nke Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nchekwa maka nkịta m nke nwere ọrịa Lymes na-adịghị ala ala?
Ọmarịcha saịtị ị nwere ebe a mana m na -achọ ịma ma ị maara nzukọ ọgbakọ ọ bụla na -ekpuchi otu isiokwu ekwuru ebe a? Ọ ga -amasị m n'ezie ịbụ akụkụ nke obodo ebe m nwere ike nweta ndụmọdụ sitere n'aka ndị nwere ahụmịhe ndị ọzọ nwere otu mmasị. Ọ bụrụ na ị nwere aro ọ bụla, biko mee ka m mara. Gozie gị!
Anọ m na-a PEụ PEA (na CoQ10) kemgbe oge ọkọchị. Na mbu, enweghị m ike ịnagide ya n'ihi nsogbu. Ugbu a ụbụrụ m na isi ọwụwa m fọrọ nke nta ka ọ pụọ, nke mara mma na-atụle na m nwere ha kwa ụbọchị.
N'ezie m na-ewere PEA. Ọ na-arụ ọrụ na-enweghị isi na Cannabinoid ndị natara. Ọ nwere mmetụta mgbakwunye mgbe ejiri cannabinoids dị ka CBD. A na-ewerekarị ya na 1,200mg / ụbọchị mana m na-ewere 400mg naanị n'ihi na m nọ n'ọrịa dị elu nke CBD (200mg / ụbọchị).
PEA na-emekarị na ahụ, na-adịghị eri ahụ, ị ​​gaghị enwe ndidi ma gosipụta na ọ dị irè maka mgbu na mbufụt na ọmụmụ kemgbe afọ ndị 1950 ..
Di m nara ya ma chee na ọ di mma.
Achọrọ m ikele gị maka mbọ ị tinyere na ide weebụsaịtị a. Enwere m olile anya ilele otu ọdịnaya di elu site n'aka gi ma emesia. N'ezie, ike okike ide ihe gbara m ume inweta ebe nrụọrụ nke m;
Ebe ọ bụ na otu n'ime ihe ize ndụ kachasị elu nke COVID-19 yiri ka ọ bụ oké mmiri ozuzo cytokine ebe mbufụt na-akpata ọtụtụ mmebi tupu usoro mgbochi anyị nwere ike ịmepụta usoro mgbochi zuru oke iji lụso nje ahụ ọgụ, ọ dị ka mgbakwunye nchekwa nke na-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ nke cytokines ga-abụ ụzọ dị mma iji kwe ka oge na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ iji lụso ọrịa a ọgụ.
Mee ka nke a gaa n'ihu, ezigbo ọrụ!
Maka m, ọ na - enyere aka na mbufụt. Ọzọkwa akwa ụra enyemaka, na-ezigbo ụra ụra site na ọkara-dose.
Ihe a yiri nkwa
Onye na-ahụ maka ọgwụ mgbochi m tụrụ aro Palmitoylethanolamide. Ewepụrụ m Mirica PEA maka ọnwa 3. O siri ike ijide n'aka. Mgbaàmà m abawanyela nke ọma, mana ogologo oge agafeela. M kwụsịrị ị itụ ya ma anaghị m ahụ ọdịiche dị mkpa n'ụzọ m si eche. Enweghị m mmetụta ọ bụla mgbe m na-a itụ ya, yabụ ma ọ dịkarịa ala, o yighị ka ọ merụrụ ahụ.
Ọtụtụ ihe dị mma na afọ efu, ọ gwụla ma ha nwere nkwado siri ike na-egosi mmụba dị mma na ọ bụghị naanị abụba-solubility, belụsọ na ha kpatara nsogbu afọ (zinc)
Aga m ewere nke ahụ na afọ efu ma enwere m ike ịme ọtụtụ oge.
Welp m tinyere ihe egwu ma nye ụfọdụ iwu taa. Ike Gwụrụ nke abdominal mgbu na-atụ anya na ọ na-arụ ọrụ.
Palmitoylethanolamide bu ezigbo mmanu fatty acid amide. Nke ahụ pụtara na ọ dị gị n’ahụ ugbu a.
Fọdụ ndị mmadụ anaghị eme nke ọ bụla, ọkwa gị ga-ada ka ị na-eme agadi. Yabụ mgbakwunye nwere ike inye aka weghachite ọkwa ndị ahụ. Achọpụtakwala ya na nri. Ọ dị ezigbo mma. Imirikiti mmadụ anaghị aghọta ihe ọ bụ, ha anaghịkwa aghọtahie ya kpamkpam.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere oke anụ ahụ nke PEA n'ime ahụ gị, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe mmetụta ọ bụla. Agbanyeghị, ndị nwere oke ogo dị ala na-enwe mmetụta dị ike. Nke a bụ ihe kpatara ị ji ahụ echiche na-agbanwe agbanwe na ya.
Maka ihe mgbu, achọpụtara m n'oge na-adịbeghị anya PEA nke m na-ewere na 1200mg kwa ụbọchị ma ọ dị ka ọ na-enyere aka
Mama m gakwuuru onye na-ahụ maka ọrịa na ụbọchị gara aga, ma gwa ya na ndị na-ahụ maka biomarkers maka mbufụt dị ukwuu, na nke mbụ ya! Anaghị m echeta otu ihe dị - ma ejiri m n'aka na mama m anaghị ekwu ụdị ọnụ ọgụgụ ha na - eji, mana ọ gwara m otu kachasị mma maka onye na - ahụ maka ihe ọkụkụ nke ngụkọta mbu dị n'etiti 0-30, ọ na-agakarị ọfụma. 60. Oge a, ọ gbara afọ 15.
Ana m eji ọkara ọkara elekere oge niile iji gụọ ọdịnaya webpage a oge niile yana iko kọfị.
Palmitoylethanolamide dị mma maka mbufụt na mgbu. Oleamide dị mma maka ụra. Ha abụọ dị mma maka adịghịzi. Anyị họọrọ PEA na Nchebe Nchebe anyị ka ọ ghara ime ụra.
M na-enwekwa isi ọwụwa mgbe ụfọdụ, ọ na-abụkarị 1-2 ugboro n'ọnwa na Palmitoylethanolamide bụ ọrụ ebube nye m mgbe m na-enwe migraine.
Anọ m na-ewere PEA na ntụ. Achọpụtala m ya ka m nwee obere mmetụ na mgbu n’elu ihe ndị ọzọ niile m na-ewere.
Otu onye bụ (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine na nke ọzọ bụ (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide. Ọzọkwa, ndị mmadụ na-agbagha Phenylethylamine na Phenylalanine oge niile, yana Cytisine na Cysteine. Mgbe ụfọdụ, kemịkalụ kemịkalụ dị nso, ma mgbe ụfọdụ ha nwere otu ndebiri okwu. Enweghị m ike ịsị na ọ masịrị m, mana Palmitoyalethanolamide bụ ọnụ. Ya mere, idebiri ya dị mfe karị.
onye mgbasa ozi
M weere ya maka mgbu eriri afo (kpatara amaghị) ma ọ rụọ ọrụ dị ukwuu. Ọ bụkwa isi ihe dị na nkịta ọgwụ nkịta m (maka ihe nfụkasị) ọ dị ka ọ na-enyere aka.
Enweghị mmetụta ọ bụla maka anyị. Emetụtaghị ụra m. Oh! Ma, o wepụkwara ikpere na-egbu m mgbu, nke bụ ego a na-atụghị anya ya.
PEA na-enyere m aka ịghọta na enwere m ihe mgbu dị ala na-aga n'ihu, ọ na-adịkwa mma mgbe nke ahụ belata obere oge.
Enweela m mgbu na-adịghị ala ala ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri. PEA na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, mgbe mgbu m na-ewekwa iwe, PEA na-eme ka ahụ m niile nwee ahụ iru ala.
Palmitoylethanolamide bu ezigbo mmanu fatty acid amide. Nke ahụ pụtara na ọ dị gị n’ahụ ugbu a. Fọdụ ndị mmadụ anaghị eme nke ọ bụla, ọkwa gị ga-ada ka ị na-eme agadi. Yabụ mgbakwunye nwere ike inye aka weghachite ọkwa ndị ahụ. Achọpụtakwala ya na nri. Ọ dị ezigbo mma. Imirikiti mmadụ anaghị aghọta ihe ọ bụ, ha anaghịkwa aghọtahie ya kpamkpam. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere oke anụ ahụ nke PEA n'ime ahụ gị, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe mmetụta ọ bụla. Agbanyeghị, ndị nwere oke ogo dị ala na-enwe mmetụta dị ike. Nke a bụ ihe mere ị ji ahụ echiche na-enweghị atụ na ya.
Ugbu a gbasara ajụjụ gị gbasara COX-2 kpọmkwem, ọ bụ modulator nke COX-2, ọ bụghị onye na-asọ mpi asọmpi. Ọ na - ejikọta na ndị nabatara endocannabinoid GPR55 na GPR119. Nke ahụ bụ otu esi edozi okwu nke cyclooxygenase-2 (COX-2) yana inricible nitric oxide synthase (iNOS). Ọ bụkwa PPAR-α agonist, nke na-achịkwa mbibi IkB-alpha na p65 NF-kappaB translocation nuklia. Mmetụta nke PPAR-are bụ n'ezie otu o si ebelata neuroinflammation. N'elu njikọta njikọta ya kpọmkwem, ọ na-eduga n'ịdịkwuo anandamide na ndị nabatara CB1 na CB2, nke bụ isi endocannabinoid ahụ gị. Ọ bụ ezigbo ụlọ!
Naanị ịchọrọ ịde akwụkwọ gbasara ihe a na-amaghị ama nke na-ekwe nkwa maka ndị ọrịa na-adịghị ala ala. Palmitoylethanolamide (PEA) bụ fatty acid amide nke na-eme na ahụ mmadụ na ahụ ọtụtụ anụmanụ na osisi ndị ọzọ. Otu dọkịta Italiantali aha ya bụ Rita Levi-Montalcini chọpụtara na PEA nwere ọgwụ mgbochi na ọgwụ mgbu
N'ihe abụọ kpuru ìsì, ebe a na-achịkwa ebe a na-arịa ọrịa 636 na-arịa ọrịa mgbu, ọnụ ọgụgụ dị mkpa iji gwọọ (NNT) iji ruo 50% Mbelata mgbu ma e jiri ya tụnyere usoro bụ 1.5 mgbe izu 3 gasịrị.
A na-enyocha PEA maka ọtụtụ ụdị mgbu. Enweghi mmetụta ọ bụla dị ka m nwere ike ịgwa.
Ntụle dị mkpirikpi na-atụle iji Palmitoylethanolamide mee ihe n'ịgwọ ọrịa mgbu na-adịghị ala ala. Ọ bụ naanị ọmụmụ ole na ole na ya na ndị ọrịa IBS na ụdị anụmanụ nke IBS. N'inye ọrụ nke usoro endocannabinoid na usoro eriri afọ ọ bụ isiokwu na-adọrọ mmasị iji nyochakwuo ọrụ nke PEA na ndị nabatara ya na ọgwụgwọ mgbu.
Olee otu nchekwa dị na Palmitoylethanolamide (PEA)?
Enyere m ụfọdụ ntụ ntụ na nso nso a ma ọ bịarute na mail taa. Anọ m na-eme ntakịrị nyocha banyere ma enwere ihe egwu ọ bụla na PEA n'ihi na ọ bụ onye na-eme ihe na COX2.
Ọ dị mma ka m were PEA?
Palmitoylethanolamide gwọrọ m akwara mgbu dị ka ọrụ ebube!
Achọrọ m ịchụpụ nke a ka ọ bụrụ na onye ọzọ ga-ahụ nke a dị ka m bara uru. Anọ m na-arịa ọrịa akwara na-agaghị ekwe mmekwata kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ. Anọ m na Stanford, anọwo na ihe niile si Fentanyl ka morphine ka oxy na benzos, mgbochi depressants wdg. Enweela m ọtụtụ ịwa ahụ na ihe a nwalere kemgbe ọtụtụ afọ mana ọ bụghị otu mkpụrụ obi tụrụ aro ka m nwalee ihe a dị mfe. Thingsfọdụ ihe nyeere aka mana ọ nweghị nke rụpụtara ọrụ. Ọ na-ewute m kwa ụbọchị mgbe ọ bụla m dinara ala ma ọ bụ nọdụ ala. Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri m ike ịga ije. Ọ bụ nsogbu akwara m na ọkpụkpụ azụ m nke ochie na-emetụta akwara m. Wasra bụ ihe m nwetara nkeji 20 n'otu oge ma na-agakarị ụbọchị ole na ole na-enweghị nke ọbụla.
N'oge na-adịbeghị anya onye m maara na-atụ aro ka m nwaa ihe a na-akpọ PEA. Enweghị m okwukwe na ọ ga-arụ ọrụ. Ma ọ dị ka nchekwa zuru oke. Amalitere m ya ihe dị na Amazon ma a mụọ ya maka afọ 60 mana anụbeghị m ya. A na-akpọ ya Palmitoylethanolamide (PEA, ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na Phenethylamine nke a na-akpọkwa PEA) Palmitoylethanolamide dị na ahụ anyị na nri anyị. Ọ bụ "fatty acid amide" nke nwere mmetụta dị ukwuu na sistemu endocannabinoid (ma na-eme anandamide, anyị cannabinoid dị egwu).
Ana m ewere 120mg ugboro abụọ n'ụbọchị. Na mbu amaghi ihe obula. N'ezie n'izu mbụ bụ otu n'ime nsogbu kacha njọ m nwetụrụla n'oge ụfọdụ. N’izu nke abụọ m tetere n’otu ụtụtụ na-amata na m na-ehi ụra abalị niile. Ihe mgbu m adịghịzi. Achọpụtara m na ọ bụ ọkpọka. Ejighị m ọ fromụ nke ọ bụla pere mpe. O mechiela tupu ụbọchị ole na ole. Ọ dị mma kemgbe ihe karịrị otu ọnwa ma ọ nweghị ihe mgbu. A maara PEA na-arụ ọrụ dị ka mgbochi mkpali na maka mgbu akwara. Minorfọdụ obere nyocha ụlọ ọgwụ nke FDA gosipụtara nkwa na mpaghara ndị a.
Enwere otutu okwu nke ndi mmadu kwuru na PEA ga agwo udiri ihe nile. IDK banyere ihe niile. Ihe m maara bụ na ọ na-enyere m aka mgbu karịa ihe ọ bụla ọzọ m nwetụrụla. Agaala m mgbu meds 100%. Enwetara m ọgwụ m niile ma enweghi mgbu !!! Ndị dọkịta m dara, ọ ga-anwale ya na ụfọdụ ndị ọrịa ọzọ.
Ọ bụrụ n'ị nwaa ya nye ya ezigbo izu ole ma ole. Ọ bara uru gbaa. Amaghi ya na ogwu ndi ozo ma obu nwere oke ogwu a mara ma dika ihe obula n’ile nwayọ. Ihe karịrị elu 300mg na-enye m obere isi ọwụwa.
Ọ na-arụ ọrụ naanị na m mgbu akwara. Obi ka na-egbukwa m mgbu. Ma ọ bụghị ya, enwere m mmetụta ka mma. Ọ bụrụ n ’ị na-arịa nrịanrịa akwara mkpụrụ ya uru inye ya ogbugba.
Magnesium bụ ihe ama ama na-akpata nrọ nzuzu, 5-HTP na-atụgharịkwa nrọ na kwa iirc.
Enweghị m ike iri magnesium ihe na-erughị 3h tupu m lakpuo ụra ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ ana m arọ nrọ nke ukwuu, anaghị m ehi ụra nke ọma.
Ahụrụ m Palmitoylethanolamide n'oge na-adịbeghị anya na m ga-anwale ya. Ọ bụ ihe dị ka otu izu ma ọ bụ karịa kemgbe m malitere iji ya ma ọ enyerela m aka ntakịrị.
Ọ na-eme m obi iru ala nke bụ ihe m na-atụghị anya ya.
Palmitoylethanolamide, Nri Pụrụ Iche Maka Nzube Ahụike, na Ọgwụ nke Ahụhụ Na-adịghị Ala: A Pooled Data Meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Palmitoylethanolamide megide Oleamide
N’isiokwu a, ọdịiche dị iche n’etu fatty acid abụọ amid a siri metụta gị?
Ha abụọ yiri ka ọ na-adabara ha, na-ejighi n'aka ma ọ bara uru ịnwale nke ọzọ. Tumadi na-achọ Dịghịzi guzozie, daashi maka ụra mma nkwalite.
Nke a bụ uche m
Ndabere bụ ezigbo ntụ ntụ. Were sublingually, ọ bụ flavorless na etisasịwo nnọọ nwayọọ nwayọọ, ma eleghị anya n'ihi na ọ bụghị mmiri soluble.
Enweela m ahụmịhe dị ukwuu n’ime ihe dịka ụbọchị iri site na mgbe amalitere m ịmụrụ ya.
Ọ bụ ọnwa ole na ole ugbu a na m hụrụ ya n'anya. Enwere m mmetụta nke ka mma karịa na ahụbeghị m mmetụta ọ bụla.
Ana m ewere 600 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị na ihe karịrị otu izu ma nsonaazụ ya pụtara ìhè.
Enweghị m nsogbu na magnesium mana 5htp tupu ị lakpuo nyere m nrọ ọjọọ tupu oge ahụ. Ekwesịrị m ịkwaga 5htp ahụ n'ehihie.
Palmitoylethanolamide enyere m enyemaka site na mgbu fibromyalgia. Anaghị m eteta n'ụra dịka a na-akụ m ụra na ụra m.